सबैभन्दा धेरै वर्षा भएका ५ ठाउँ कहाँ कति वर्षा ? हेर्नुहोस पूरा विवरण – Sudarshan Khabar
सबैभन्दा धेरै वर्षा भएका ५ ठाउँ कहाँ कति वर्षा ? हेर्नुहोस पूरा विवरण
आइतबारदेखि देशका सबैजसो ठाउँमा लगातार झरी पर्न सुरु भयाे । मङ्गलबार भने झरी पर्न रोकिएको छ । काठमाण्डौ उपत्यकासहित देशका धेरै ठाउँमा दिउँसो केहीबेर घाम पनि लाग्यो । तर फेरि राति पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविद्ले बताएका छन् । तीन दिन लगातार परेको वर्षाका कारण धेरै ठाउँमा बाढी पहिरो गएको छ । सबैभन्दा धेरै नवलपरासीको
डण्डामा वर्षा भएको वरिष्ठ मौसमविद् डाक्टर इन्दिरा कँडेलले बताउनुभयो । नवलपरासीको डण्डामा तीन दिनमा तीन सय ५१ दशमलव २ मिलिमिटर पानी परेको छ । डण्डामा मङ्गलबार एक सय पाँच दशमलव ८ मिलिमिटर, सोमबार एक सय ५७ दशमलव ८ मिलिमिटर र आइतबार ८७ दशमलव ६ मिलिमिटर वर्षा भएको छ ।
ब्यानर पोस्ट, भिडियो, समाचार, स्वास्थ्य /जिबनशैली